တရုတ်နိုင်ငံက ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများသို့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး သန်း ၆၀၀ ကျော် ပံ့ပိုးပေးထား - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့ရှိ Sinovac Life Sciences ကုမ္ပဏီ လီမိတက်၏ ထုပ်ပိုးမှုလိုင်းတွင် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများအား စစ်ဆေးနေသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း၊ ဇူလိုင် ၂၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ COVID-19 ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး ပံ့ပိုးရန် နိုင်ငံနှင့် ဒေသ ၂၀၀ ကျော်ထံ COVID-19 ကာကွယ်ဆေး သန်း ၆၀၀ ကျော် ပံ့ပိုးပေးထားကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူက ဇူလိုင် ၂၂ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် နိုင်ငံနှင့် ဒေသများသို့ နှာခေါင်းစည်း အခုရေ ဘီလီယံ ၃၀၀ ကျော်၊ တစ်ကိုယ်ရေ ကာကွယ်ရေးဝတ်စုံ ၃.၇ ဘီလီယံကျော်နှင့် ရောဂါစမ်းသပ်ပစ္စည်း ၄.၈ ဘီလီယံကျော်တို့အား ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူ Li Xingqian က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားနေသည့်ကြားမှ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များနှင့် အခြားသော ထုတ်ကုန်များအား ကမ္ဘာသို့ ပံ့ပိုးရန် အလျင်အမြန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ကမ္ဘာ့ ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ၌ ကူညီလျက်ရှိကြောင်း Li က ဆိုသည်။ (Xinhua)
BEIJING, July 22 (Xinhua) — China has provided over 600 million doses of COVID-19 vaccines to more than 200 countries and regions to support the global fight against COVID-19, an official with the commerce ministry said Thursday.
The country has offered over 300 billion masks, 3.7 billion protective suits and 4.8 billion testing kits to countries and regions, Li Xingqian, an official with Ministry of Commerce, toldapress conference.
Despite COVID-19 disruptions, China has adapted quickly and moved fast to provide medical supplies and other products to the world, contributing to global anti-pandemic efforts, Li said. ■
Photo : A staff member checks tags on vials of COVID-19 vaccine atapacking line of Sinovac Life Sciences Co., Ltd. in Beijing, capital of China, Dec. 23, 2020. (Xinhua/Zhang Yuwei)